Alaabada cusbooneysiineysa |
C&S Grocers si ay u siiso isbitaalada 100,000 oo ah maaskarada 'KN95', taageerada bangiyada cuntada
C&S Wholesale Grocers, oo ah shirkadda ugu weyn ee alaabada gunta jumlada, ayaa khamiistii ku dhawaaqday qorshe gargaar oo dalka oo dhan ah oo lagula dagaallamayo cudurka faafa ee coronavirus, oo ay ku jiraan in ka badan $ 300,000 oo deeqo ah oo siin doona 100,000 oo loo yaqaan 'KN95' maaskaro ah isbitaalada ku yaal gobollada ay dhibaatadu saameysey. .
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka qoddo wejiga waalka waalka: Faa'iidooyinka iyo qasaaraha
Cudurka cusub ee faafa ee coronavirus wuxuu bulshada u keenay qeexitaan cusub oo caadi ah kaas oo hada ay ka mid tahay xirashada wejiga wajiga. In kasta oo faa'iidooyinka wajiyadu ay cad yihiin, haddana adeegsiga baahsan ayaa soo saaray cillado fara badan: cuncunka wajiga, neefsashada oo adkaata, qoyaanka oo soo kordha iyo muraayadaha cabsida leh ee cabsida leh. DAD Badan: Wejiga ...
Daboolida wajiga, Maskaxda N95 iyo maaskarada qalliinka: Cidda ay yihiin iyo sida loo isticmaalo
CDC-da ayaa sheegaysa in qof walba uu xirto indho shareer aan caafimaad aheyn markasta oo aad la macaamileyso dadka kale inta uu socdo cudurka coronavirus. Laakiin sidee ayey kuwani uga duwan yihiin wajiga maaskaro darajo caafimaad leh? Maaskarada wajiga waxay noqdeen mowduuc aad looga doodo xilligii cudurka faafa ee coronavirus. Cabsida badan ...
Ugu horreyn 100,000 100,000 N95 waji daboolan oo amar 24M ah ayaa yimid magaalada Los Angeles
LOS ANGELES - 100,000-kii ugu horreeyay ee 24-milyan N95 ah oo waji-dabool heer-caafimaad ah oo ay amreen magaalada Los Angeles ayaa yimid Khamiista waxaana lagu faafin doonaa bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo jawaabeyaasha ugu horreeya. “Magaalada waxay leedahay awood wax iibsi oo aan caadi aheyn, sidaa darteed waxaan u adeegsaneynaa inaan wax ku iibsanno jumlad hoose ...
N95 Masks iyo Coronavirus: Wax Soo Saar Dheeraad Ah Oo Socda
Si wax looga qabto baahida sii kordheysa ee waji xirmooyinka inta lagu guda jiro dilaaca cudurka coronavirus, COVID-19, Honeywell wuxuu si dhaqso ah u xoojinayaa wax soosaarka isla markaana ka sameynayaa malaayiin N95 waji ah Mareykanka. Waxaan ku balaarineynaa howlaha wax soosaarka warshad ku taal Smithfield, Rhode Island, oo sidoo kale soo saarta ...
Nooca Qaar Ka Mid Ah Maaskarada N95 Ayaa Waxyeello Ka Badnaan Karta Wanaag
La wadaag on Pinterest Khubarada ayaa sheegaya in waji gaar ah oo N95 ah oo leh walxaha hore ay ilaalinayaan isticmaalaha laakiin kama hor istaageyso qofkaasi inuu ku faafo COVID-19 kuwa kale ee ka agdhow. Getty Images Khubaradu waxay uga digayaan dadweynaha inay xirtaan noocyo ka mid ah N95 wajiyada maaskaro oo leh walxaha hore. Waxay yiraahdaan maaskarada ayaa ilaaliya ...
Tijaabinta in shaashadda N95 ee aan la hubin ay waxtar leedahay
Tan iyo markii uu Covid-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka, dowladaha gobolka waxay ku mashquulsanaayeen sidii loo heli lahaa loona sugi lahaa N95 waji-qaboojiyeyaasha neefta, nooca wajiga ka xirta isla markaana shaandheeya walxaha faafa, kana ilaaliya shaqaalaha safka hore inay neefsadaan coronavirus. Yaraanta qaran ayaa horseeday gobollada ...
FDA Waxay Mamnuucaysaa Wajiyadda Cilada, 3 Toddobaad Kadib Imtixaannadii Fashilmay
Maamulka Cuntada iyo Dawada ayaa ka mamnuucay 65 soo-saare inay iibiyaan waji-furka si loogu isticmaalo caafimaadka. Laakiin tallaabadani waxay timid ka dib markii tijaabooyin bishii la soo dhaafay ay muujisay in waji-daboolayaashu aysan la kulmin heerarka. Muddo saddex toddobaad ah Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ayaa oggolaaday iibinta dhowr nooc oo wajiga wajiga N95 u eg ee Mareykan ...
Maaskarada 'KN95' iyo faafa
Sida laga soo xigtay websaydhada Health Canada, waxay bilawday oggolaanshaha adeegsiga maaskarada loo yaqaan 'KN95' oo loogu talagalay ujeedooyin caafimaad iyada oo la tixgelinayo aafada faafa. “Si loo ballaariyo helitaanka N95 neefsadayaasha inta lagu jiro aafada, heerar u dhigma oo u dhigma ayaa sidoo kale la aqbali karaa… tan waxaa ka mid ah caafimaadka iyo ...
Caafimaadka Kanada wuxuu soo saaraa dib-u-soo-celinta qaar ka mid ah maaskarada 'KN95' oo lagu sameeyay Shiinaha
Maaskarada waxay keeneysaa 'halis caafimaad iyo badbaado,' sida lagu sheegay war-murtiyeed loo soo saaray soo dejiyayaasha Geoff Leo · CBC News · La daabacay: May 13, 2020 5:38 PM CT | Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Maajo 14 Caafimaadka Kanada ayaa dib u soo celisay waji gashiga KN95 oo ay soo saareen daraasiin shirkado shiineys ah ka dib markii ay tijaabisay in ay 'a ...